Daawo: Farmaajo iyo midowga yurub oo ku heshiiyay arin cunaqabateyn ku noqon karta maamul goboleed-yada | Kismaayo24 News Agency
Daawo: Farmaajo iyo midowga yurub oo ku heshiiyay arin cunaqabateyn ku noqon karta maamul goboleed-yada
Sunday May 28, 2017 - 10:20 under Somali News by Tifaftiraha K24
Midowga yurub waxa uu soomalia ku bixiya dhaqaalo aad u badan oo lagu bixyo mashaariic kala duwan oo midowga yurub soomalia uu ka fuliyo.
Dhaqaalaha midowga yurub uu ku bixiyo mashaariicda horumarineed ee dalka soomalia waxaa marka hore si toos ah u maamuli jiray midowga yurub oo saxiixa ugu dambeeya laheyd balse hada wixii ka dambeya dowladda federaalka ayaa la wareegeysa maamulidda mashaariicda midowga yurub ee soomalia.
“Mashaariicda ay Midowga Yurub ku bixiyaan dowlad wanaagga, horumarinta iyo gargaarka Soomaaliya waxaa maanta wixii ka dambeeya maamuli doona Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Wasaaradda Qorsheynta, Waan uga mahadcelinaynaa Midowga Yurub taageerada joogtada ah ee ay ku bixiyaan dowlad dhisidda Soomaaliya.” ayuu yiri wasiirka qorsheynta xukuumadda soomalia Jamaal Maxamed Xasan.
Heshiiskan waxa Soomaaliya u saxiixay Wasiirka Qorshaynta Horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga, halka uu Midowga Yurubna u saxiixay Agaasimaha guud ee Horumarinta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Midowga Yurub , waxaana goob joog ka ahaa Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre iyo Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya .
Halkaan hoose ka daawo heshiiska